Ungaita sei kuti uwane WhatsApp paApple Watch | IPhone nhau
louis padilla | | IPhone maapplication, Apple Watch
Iyo yekumirira kuti ugone kushandisa WhatsApp paApple Watch inoita kunge isina magumo. Iwe hautombo rangarira kana Teregiramu yakatanga chirongwa chayo cheApple Watch, uye Nekudaro, iko kunonyanya kukosha iko kutumira mameseji application munyika kunoramba kuve neshanduro inogona kushandiswa paApple wachi.
Nekudaro, kumirira kwese kune kupera, uye kunyangwe kana zvisiri zvepamutemo, isu tatova nemhinduro yekugona kushandisa WhatsApp paApple Watch. Isu takaedza WhatchUp, chishandiso chinokutendera iwe kuverenga mameseji, kuona mafoto uye kutumira WhatsApp mameseji kubva kuApple Watch yako. Muvhidhiyo ino tinokuratidza maitiro ekugadzirisa uye kushandisa chishandiso ichi.
Icho chikumbiro chakabhadharwa, asi zvirokwazvo kune vakawanda chinobhadhara mukutsinhana nekugona kushandisa WhatsApp paApple Watch. Icho hachina hunyengeri kana hunyengeri, zvazvinoita kuisa WhatsApp Web pawachi yako, kuverengera kodhi yeQR nezvose kuti iite kuti ishande. Iyo yekumisikidza haina kuomarara uchitevera rairo dzakaratidzirwa nechishandiso neawa, sekuratidzira kwatinoita muvhidhiyo.
Kamwe ikamiswa, mashandisiro ayo anonzwisisika. Iwe unozokwanisa kuwana zvese kutaurirana kwauinako paWhatsApp, kunyange hazvo kana mamwe aine mameseji mazhinji, angangotadza kuratidzwa zvizere. Icho hachisi chaicho chinokanganisa, sezvo ini ndinopokana kuti chero munhu achange achivhura kuburikidza nemeseji paApple Watch. Iko kunyorera kunoita basa raro zvakakwana: unogona kuona mameseji, kusanganisira mifananidzo, uye unogona kutumira meseji nekunyora izwi, kunyora ruoko, kana emojis. Nenzira, kana uine matambudziko nemutauro, kubva kuchikumbiro vanokuudza maitiro ekuchichinjisa kune icho chaunoda. Tichakamirira iyo yepamutemo app kuti isvike paApple Watch, iyi mhinduro yakanaka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Maitiro ekuve neWhatsApp paApple Watch
Iyo app ichiri muchitoro cheapp, mune chinyorwa chandakaverenga kuti hachizi
Ichokwadi. Zvinodhura € 2,29.
Mhando idzi dzekushandisa dzakachengeteka here?
Ivo vanoipa iyo 2,4 kubva pa4
Iwe unoti zviri kutora nguva kuendesa iko kunyorera kuwatch asi iwe unokanganwa kuti haina kana App yeipad kana PC. Pasina mubvunzo whatsapp inoshandiswa neayo mushandisi base kwete yehunhu hwayo, nekuti izvo zvatova teregiramu.
Haizo tarise qr kodhi
Pindura kuna jovi
Zvinoda basa asi iye anoverenga nekuiswededza kure zvishoma kupfuura iyo account
Ndiri kuona kuti pane imwe nzira inonzi whatschat, handizive kana paine munhu akaedza mbiri idzi kuti ndedzipi dzinoshanda zvirinani, ndine watchup yezvino uye kuenda kune yechipiri vhezheni haina kushata
Ini ndakaiisa, asi ine matambudziko mazhinji, inodimbura uye nhaurwa dziri pawachi hadzina kugadziridzwa (Apple Watch 3), kuti ubatanidze dzimwe nguva haina, saka ndadzorera ndokukumbira kudzoka kuapuro. Uye ivo vatondiitira iko kudzoka, ndatenda kunaka !!!
Iwe unayo sarudzo yekutumira maaudio zvakananga? Ini handidi kurairwa, uye kana iwe uchigona zvakare kuteerera maaudio kubva kuwachi, pane chero munhu akambozviedza izvo? Ndatenda!
Iwe wakakumbira sei kudzorerwa? wakapa zvikonzero zvipi?
Unopinda hache unowana iyo colon bar bar reportaproblem dot apple dot com (Ndinozvitaura seizvi nekuti ndinofungidzira kuti chaiwo maratidziro anorambidzwa, kunyangwe kuve zviri pamutemo hazvifanirwe kudaro)
wobva wapinda mukati, tsvaga iyo app yaunoda kudzoka uye vhura donhwe-pasi iro rinoti zvingasarudzika, sarudza iyo inoti unoda kudzorera iyo app uye voila. (une mazuva gumi nemana ekudzoka)
Ndezvekupenga. Hazvishande. Iyo inodimbura nguva dzese, haina kuwiriranisa ... marara
Izvo hazvishande, usazvitenge, hazviise pane ese Apple Watch saka hazvibatanidze. Ruzivo rusina kukwana
Pindura kuna Claudiocsv
Kugadziriswa uye kutaura kwakazara: Mushure mekunyunyuta, ndakashandisa nzira yakapusa yandakatangazve iyo iPhone uye ipapo yakaiswa uye inoonekwa paApple Watch.
Ndakaedza watchup uye watchchat uye ndinogona kutaura kuti yekupedzisira inoshanda zvirinani uye musimudziri anogara achiigadziridza nekuvandudza
Kusvikira appel ndaverenga
Inonzi "kurasikirwa." Ndatenda zvikuru, ndinozvigadzirisa.